लन्डनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई एनआरएनएको स्वागत, विचाराधीन नागरिकता विधेयक लचिलो बनाउन माग, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
लन्डनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई एनआरएनएको स्वागत, विचाराधीन नागरिकता विधेयक लचिलो बनाउन माग
लन्डन । बेलायत भ्रमणमा आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लन्डनमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेले स्वागत तथा अभिनन्दन गरेको छ । एनआरएनए युकेको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अभिनन्दन गरेको हो ।
मंगलबार बिहान लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित एक समारोहमा उक्त अभिनन्दनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । कार्यक्रममा एनआरएनए आइसीसीका उपाध्यक्ष कुल आचार्यले नेपालमा लगानी भित्र्याउन गैर आवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको स्मरण गरे । त्यस्तै उनले हाल संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धि विधेयकमा रहेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई लचिलो बनाउन माग गरेका थिए।
उपाध्यक्ष आचार्यले गैर आवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिने नागरिकताको संविधानमा रहेका ब्यवस्थाले केही कठिनाई आएको बताए । उनले नेपालमा लगानी भित्र्याउन गैर आवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको बताए । उनले हाल संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा रहेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई छिटो, छरितो र झन्झट मुक्त बनाउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा एनआरएनए युकेका अध्यक्ष योगकुमार फगामीले ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सन लगायतका समस्या समाधान गर्न बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाउन पहल गर्न, गोर्खा सैनिकहरू त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार बेलायत आएको हुँदा उनीहरुको नागरिकताको विषयलाई अलग ढङ्गले सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरे । फगामीले “भिजिट नेपाल २०२०” को प्रवर्द्धन गर्न जति सक्दो चाँडो नेपाल वायु सेवा निगमको लन्डन९काठमाडौँ सिधा उडानको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरे ।
त्यस्तै एनआरएनए युकेका अध्यक्ष योगकुमार फगामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरे । कार्यक्रममा एनआरएनए युकेका उपाध्यक्षहरू शेर सुनार, प्रेम गाहा, पुनम गुरुङ, ललित न्यौपाने, सुशीला राई, महासचिव राजकुमार त्रिपाठी, एनआरएनए आईसीसीका सल्लाहकार सुरेन्द्र श्रेष्ठ, प्रवक्ता रमेश सिंह सराङकोटी, सङ्गीता मरहट्ठा, लगायतको सहभागिता थियो।